ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုကြော်ငြာများ - Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ
NYECountdowns.com, LLC ။ ကမ္ဘာ့အများဆုံးမယုံနိုင်စရာဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များထဲကတစ်ခု ... Killerspots.com, Inc ၏နှမကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို့နိုက်ကလပ်, ပရိုမိုးရှင်းများနဲ့ Arena Worldwide မှရာပေါင်းများစွာကနောက်ဆုံး 15 နှစ်ပေါင်းအဘို့မိမိတို့အကြီးဆုံးပါတီများအတွက်အဆင်သင့်ရအကူအညီပေးခဲ့လေပြီတကား အခုတော့သူ့ရဲ့သင့်ရဲ့အလှည့်! အမြန်တစ်ခုခုလိုအပ်ပါသလား? Done! မဆိုဘာသာစကား။ မဆိုအရှည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆို,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသတ်သမားပို့လိုက်ကြတယ်တွေ့မြင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူး Channel ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အောက်ကိုဆင်း
15 တစ်ကလစ်¢ထက် * Facebook မှာကြော်ငြာကိုနိမ့်
60 SEC ၏ရေဒီယိုအစက်အပြောက်
သင့်ရဲ့နှစ်သစ်ကူးဧဝကို EPIC စေလိမ့်မည်ဟုရေဒီယိုကြော်ငြာ! ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်နိုက်ကလပ်နှင့်နေရာများရာပေါင်းများစွာများအတွက်တစ်နှစ်အကြာတွင်တစ်နှစ်လူသတ်သမားရေဒီယိုထုတ်လုပ်မှုပွုပါပွီ။ အမှန်တကယ်ယခုသင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလိမ့်မယ်တဲ့လူသတ်သမားရေဒီယိုစီးပွားဖြစ်ရယူပါ!
30 SEC တီဗီအစက်အပြောက်
60 SEC ဝက်ဘ်ဆိုက်များ / တီဗီအစက်အပြောက်
social media ကသင်၏မော်ကွန်းနှစ်သစ်ကူးဧဝကိုမြှင့်တင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ထုမျှဝေယူဆောင်လာနိုငျသောဝဘ်ဗီဒီယိုကိုလုပ်ကြပါစို့ သင်ကအာမခံခစျြလိမျ့မညျ။